IHIE ERROR: ERROR FLASHCTRL [ENOTINSTALLFLASH] - ESI MEE - 2019
Ihie Error: Error FlashCtrl [eNotInstallFlash]
Ọtụtụ ndị ọrụ RaidCall na-enweta njehie Flashctrl mgbe ha mepee windo nkata ọ bụla ma ọ bụ ozi ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ, mgbasa ozi ma ọ bụ mgbe ịchọrọ ịgbanwe avatar). Anyị ga-ele anya iji dozie njehie a.
Ihe kpatara njehie ahụ bụ n'eziokwu na ị nwere ma ọ bụ na ọ bụghị emelitere Adobe Flash Player.
Kedu otu esi emelite Flash Player?
Emekarị mmelite ahụ na-eme na akpaghị aka: usoro ihe a nwere ohere ịnweta netwọk ma nyochaa oge maka mmelite na nkesa ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụla, a ga-ajụ gị maka ikike iji melite ọrụ ahụ. Dabere na ọnụọgụ ahọpụtara, mmelite ahụ nwere ike ịdaba na akpaghị aka na-enweghị òkè gị (akwadoghị ya).
Ọ bụrụ na imelite aka adịghị eme, ị nwere ike ime ya na aka. Iji mee nke a, budata ọrụ ahụ ma wụnye ya, ya mere, a ga-ebudata usoro ihe omume a karịa n'oge ochie.
Download Adobe Flash Player maka n'efu
Mgbe emechara ya, njehie ahụ lara. N'isiokwu a, anyị lere anya na ị nwere ike imelite Adobe Flash Player na mbipute ọhụrụ. Anyị nwere olileanya na isiokwu anyị enyerela gị aka.